Uru na nsogbu nke plums, ọgwụ ọgwụ na contraindications iji - Osisi Oriri - 2020
Plum: uru, nsogbu, ọdịnaya caloric, mejupụtara, jiri
Plum - otu n'ime mkpụrụ osisi kachasị ama na ụmụaka na ndị okenye. E wezụga eziokwu ahụ bụ na a na-eme ọtụtụ nri ndị na-amasịkarị ya, mkpụrụ ahụ nwekwara ọtụtụ ọgwụgwọ. Ngwurugwu adịghịkwa atụfu ya na ọgwụgwọ ọ bụla.
Kedu uru osisi bara uru
Kedu uru ndị dị na osisi pọmrị
Njirimara bara uru nke mkpụrụ osisi
Ọgwụ ọgwụ nke plums, dị ka a na-eji osisi nkume osisi na ndiife na nkà mmụta ọgwụ
Plum na cosmetology
Esi eji ogwu esi nri
Plum: nsogbu na contraindications
Plum: ihe oriri na-edozi ahụ, vitamin na mineral
A na-atụle Plum dị ka ihe oriri, ihe bara uru bụ ihe dị ka 30 kcal kwa 100 g. Ihe ọzọ, plum bụ naanị ụlọ nkwakọba ihe nke vitamin: o nwere vitamin A, C, PP, E, B1, B2, B6 na R. O nwere acids organic, malic na citric acid, nri nri na fructose. Mkpụrụ ahụ nwere fiber, pectin na antioxidants. Nakwa, mkpụrụ osisi ahụ bara ụba dị ka iodine, zinc, fluorine, calcium, manganese, chromium, ọla kọpa, phosphorus. Na ọdịnaya nke potassium kwa 100 g nke ngwaahịa bụ 215 mg.
Ị ma? A na - egosi na British love of plum na eziokwu ahụ bụ "plum" dị n'ọtụtụ aha nke ụlọ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, mmanya a na-akpọ "Wild Plum" (Wild Plum) na Edinburgh ma ọ bụ mmanya "Yellow Plum" (Yellow Plum) na London, nke na-abụghị gara Winston Churchill ozugbo.
Plum na-erite uru site n'eziokwu ahụ bụ na nwa ebu n'afọ bụ àgwà laxative. Ọ na-eji nwayọọ na-enyere aka ịchịkwa obi, n'emebighị onye ọrịa. Ọbụna ndị ọkachamara na-atụ aro ya maka ndị nwere ọnya na-egbu egbu ma na-ata ahụhụ site na afọ ntachi. Ịme nri nke plums na-emekarị ka ebelata ọbara cholesterol.
Plum epupụta nwekwara uru bara uru, ma eleghị anya naanị ihe ha na-emegiderịta bụ onye na-ekweghị n'ihe ndị ahụ. Akụkụ bụ isi n'ime ngwakọ nke mkpụrụ osisi ahụ bụ coumarins. Ihe ndị a nwere mmetụta dị nro: ọbara ọbara ha na-egbu egbu, na-agbanye mgbidi nke arịa ọbara ma belata ọnọdụ dị na rheumatism na gout, dịka nsị. Nakwa, site n'enyemaka nke nsị nke osisi plum, ọrịa nrịanrịa na ọnyá ndị na-efe efe, site n'otu aka ahụ.
Tụlee uru ndị dị n'ime mkpụrụ osisi ahụ maka ahụ anyị. N'ezie, osisi dị mma maka ndị mmadụ buru ibu na enwe nsogbu nsogbu, ndị na-achọ ibu ibu, n'ihi na ha nwere mmetụta diuretic ma bụrụ ndị magburu onwe ya n'iwepụ nnu nnu na cholesterol si n'ahụ ma bụrụ nke ahụ na-etinye ya ngwa ngwa. Ihe ọ bụla ọzọ, plum na-emekwa dị ka ihe na-adịghị mma, na-ewepu nsị na ụbụrụ si n'ahụ. Osisi dị mma maka ndị na-arịa ọbara mgbali elu, ọ bara uru iji ha maka rheumatism. Mkpụrụ osisi ndị nwere mmetụta dị nro na-eme ka ọnọdụ nke ndị ọrịa nwee mgbatị na gallbladder, na-eme ka mmiri bile.
Ọ dị mkpa! Potassium na enyere akwara aka inweta mkpali nke na-eme ka mbelata ha. Ya mere, iji mkpụrụ osisi na-akwado ma na-arụ ọrụ obi.
Ajuju ajuju ma enweghi ike ma obu ike bu ihe omumu nke oma. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ herbalists na ndị na-agwọ ọrịa na-akwado ịmepụta nsogbu na metabolism na nsogbu nke eriri afọ na enyemaka nke plums. Ihe ọṅụṅụ na pulp dị mma mma nsia motility, ma ọ bụ a idobere nke ọtụtụ vitamin, gụnyere vitamin C, dị mkpa maka igbochi nje nje. Ọtụtụ mgbe, nkà mmụta ọdịnala na-atụ aro iji plums nye ndị nwere nsogbu na akụrụ: plums bụ nnu dị mma. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji ọgwụ mgbochi mee ihe iji gbochie mgbaàmà na-adịghị mma nke ọrịa anụ ahụ ma ọ bụ mmerụahụ.
Njirimara bara uru nke plum na vitamin C na ngwakọta ya na-enye anyị ohere ịtụle ya dịka ihe ngbochi megide oyi, yana ezigbo onye na-ahụ maka ọgwụ antipyretic. Mkpụrụ pọmpụ na pulp dị mma ma gosipụta maka giardiasis (ọrịa nke nje na-apụta na obere eriri afọ). Ọgwụ mmụta ọdịnala na-atụ aro ka ịṅụ ihe ọṅụṅụ na akwụkwọ osisi tii. Ihe ọṅụṅụ a na-atọ ụtọ na-eme ka ụra na-ehi ụra ma na-eme ka akwara kwụsị.
Mmasị Na nke mbụ, eriri rutere Russia site na Tsar Alexei Mikhailovich n'afọ 1654. Osisi mbụ toro na ubi ubi eze, sitekwa n'ebe ahụ gbasaa n'ogige ndị Russia, ọ bụ ezie na ọ nwetara ihe kachasị ewu ewu na ịkụ mkpụrụ osisi na ngwụsị narị afọ nke 18.
A na-enyocha ọgwụ ọgwụ nke plums site na nke oge a. A na-eji mkpụrụ osisi pulp mee ihe n'ụzọ dị irè dị ka nlọghachi, toning na onye na-edozi ahụ. Mkpụrụ ihe ndị dị na plums na-ewusi ike ma weghachite ntutu na mbọ, na-enwu gbaa na nro na-agbakwunye na ntutu isi. Beta-carotene smoothes wrinkles oge mbụ, na-egbochi ọnwụ nke collagen, nke dị mkpa iji chekwaa akpụkpọ anụ. A na-eji pulp mee ka creams, masks, lotions na tonics. Oleekwa ihe bara uru dị na ọkpụkpụ mmanụ na ọkpụkpụ! Ihe mejupụtara mmanụ na-esi ísì ụtọ gụnyere palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, eicosanoic acid. Ke adianade do, ọ bara ọgaranya na iodine na sitosterol. Ọnụnọ nke antioxidants na acid fatty acid, vitamin E na mineral na-adị nro na smoothes akpụkpọ anụ, ebe ọ dị mfe itinye obi. Copper, iron, calcium, magnesium, zinc, phosphorus na-adị na nkume nke osisi a na-eji emepụta ihe ọkụkụ, nke na-enye ohere ọ bụghị naanị iji kpochapụ akpụkpọ ahụ, kamakwa iji zụọ ya.
Plum bụ ezigbo ewu na nri. Site na mkpụrụ maka oyi egbute jam, jam, jam, marmalade na marshmallow, compotes na juices. A na-eji uhie ọhụrụ mee ihe dị ka nju maka pies na pies, impregnations dị njikere maka achịcha na muffins. A na-akwadebe ọtụtụ ihe oriri na-atọ ụtọ na plums: puddings, fouss, jelii, candy candy, poteto mashed na mkpụrụ osisi candied. Osisi na-eme ezigbo ihendori maka anu na ulo ozuzu okuko.
A na-akpọnwụ ahịhịa, mịrị amị, pickled, oyi na mmiri. Ụlọ ọrụ ndị na-aba n'anya na-adịghị mma na-enweghị plums: vodka, mmanya, mmanya na-egbu egbu, tinctures na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe na-eme ka osisi a bụrụ ihe bara ezigbo uru bụ ihe niile plums dị mma maka ahụ nke na-agaghị apụ n'anya mgbe ọ na-agwọ mkpụrụ osisi ma ọ bụ ihicha ya, ihicha. Dị ka ọ dị na cosmetology, a na-eji mmanụ aṅụ na ike na isi na-esi nri: nnukwu okpokoro almond ya na ihe na-atọ ụtọ mgbe ọ chọpụtawo ihe na-eme ka ndị na-emepụta sụti, achịcha na pies.
Dị ka ngwaahịa ọ bụla, plums, na mgbakwunye na uru bara uru, nwere contraindications. A na-eme ka ahihia dị iche iche na-arịa ọrịa ọsịsa. Na-arịa ọrịa shuga siri ike na-egosi ya. Ọ bụ ekwesighi ịṅụ ihe ọṅụṅụ gwakọtara ihe ọṅụṅụ. A naghị atụ aro ka ị nye ndị na-erubeghị afọ otu nnukwu poteto ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ. Ndị nwere oke acidity nke afọ kwesịrị iri plums na ntakịrị ọnụ ọgụgụ. Ige nti mmetụta gị kwesịrị ịbụ nfụkasị.
Ntị! Ngwongwo umuaka nke umuaka agagh enwe ike ichikota osisi ahu, nke ga eme ka iwe na ihe ngbu na eriri afọ na afo.
Plum - mkpụrụ osisi vitamin bara uru, ma ọ bụrụ na ị na - eri ya na oke ezi - ị ga - eme ka ahụ gị jupụta na vitamin, na mineral, na ume dị mkpa.